कर्मवीर नेपालीको सम्मान हुन सकेन | Rapti Samachar Weekly
कर्मवीर नेपालीको सम्मान हुन सकेन
हाम्रो पुर्खाले निर्माण गरेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरहरु संरक्षणको अभावमा भग्नावशेषका रुपमा देखिन थालेका छन् । मल्लकालिन
राजाहरुले निर्माण गरेका उपत्यकाको मठमन्दिर पनि उचित संरक्षणको अभावमा जिर्ण अवस्थामा देखिएका छन् । उपत्यका बाहिर निर्माण भएका शक्तिपिठका मन्दिरहरु, नदी किनारमा
रहेका धार्मिक स्थान र त्यसक्षेत्रमा बनाइएका भौतिक
संरचनाहरुलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्नसकेको छैन ।
नेपालको इतिहासमा नै सडक यातायात सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले ७५ जिल्ला पैदलयात्रा गरी नेपाली इतिहास लेख्ने धर्म र कर्मवीर योगी नरहरिनाथलाई पनि राज्यले उचित सम्मान दिन सकेको छैन । धर्मबाट नै विश्व शान्ति र कल्याण हुन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर योगीले नेपालको धेरै स्थानमा कोटीहोम लगाउनु भयो । संस्कृतका ज्ञाता योगीले जसले वेदको अध्ययन गर्दछ, त्यो नै ब्राह्मण हो भनि ग्रैहब्राह्मणलाई वेदका ऋचा पढाउँदै जनैसमेत राखिदिएर उदाहरणीय बन्नुभयो । योगीले सञ्चालन गर्नुभएको १ सय २९ स्थानको कोटीहोमको प्रभावबाट सडक, पाटी, पौवा, विद्यालयजस्ता मानवतासँग जोडिएका स्थलहरु निर्माण भयो ।
संस्कृत भाषालाई देशव्यापी गराउनु पर्दछ । संस्कृत शिक्षाले नै मानवलाई धर्म र कर्मविर बनाउँछ । संस्कृत शिक्षाले नै हिन्दूहरुको दर्शन वेद र उपनिवेशको अध्ययन गराउँछ भन्ने उद्देश्य लिएर दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गराउनमा पनि योगी नरहरिनाथको ठूलो भूमिका रहेको थियो । बेल्झुण्डीमा योगीले चिम्टा गाडेर आफ्नो धुनी सल्काएर विश्वविद्यालयको माग राखेका थिए । आज नेपालकै पहिलो संस्कृत विश्वविद्यालय जहाँ सैयौंको संख्यामा त्यही अध्ययन गरेर पिएचडीको उपाधि हासिल गरिसके कतिले त्यही विश्वविद्यालयमा अध्यापन र पदाधिकारी बन्ने मौका पाए । तर, खै त योगीको सम्मान हुन सकेको ? योगीको बारेमा विश्वविद्यालयले कुनै कार्यक्रम राख्ने गरेको छ ? यस्ता कुराहरु जनमानसमा उठ्ने गरेको छ ।
धर्म, संस्कृति, इतिहास, ज्ञान, दर्शनका विद्वान योगी नरहरिनाथको जन्म विसं. १९७१ जुम्लामा भएको हो । जिल्ला विभाजन हँुदा पछि कालिकोट जिल्ला भएको छ । बुबा ललितसिंह थापा र आमा गौरी देविबाट जन्मिएका योगीको वास्तविक नाम वलविर थापा हो । सानै उमेरदेखि धर्म, संस्कृतिका बारेमा खोज गर्ने थापा १३ वर्षको उमेरमा नै घरछाडी महन्त श्रीप्रनाथबाट शिक्षादिक्षा प्राप्त गरे । नाथको दिक्षाप्राप्त गरेपछि उनको नाम योगी नरहरिनाथ रहन गएको हो । धर्म र कर्मवीर योगीले कोटीहोम मात्र होइन उनको पहलमा १६ स्थानमा मन्दिर निर्माण गरेका छन् । दाङ जिल्लाममा मात्र चौघेरा, घोराही नगरपालिका, तुलसीपुर नगरपालिका र रिहारमा समेत गरि तीन स्थानमा कोटीहोम लगाएका थिए । उनले कोटीहोम लगाउँदा निर्माण भएका भौतिक संरचना भत्किने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जीवनमा कहिल्यै नथाक्ने योगीले हिमालदेखि तराईका मैदानी भागको भ्रमण गरी ढुङ्गा, धातु र भोजपत्रमा लेखिएका इतिहासलाई लिपिवद्ध गराई नेपालको इतिहास लेखेका छन् । योगीले धर्म, साहित्य, इतिहास समेत गरी १ सय १४ वटा पुस्तक लेखेका छन् । योगीमा संस्कृत शिक्षा, गाई र ॐमा उहाँको ठूलो विश्वास रहेको थियो । नरहरिनाथ निर्भिक र स्पष्ट वक्ता
थिए । उनी धार्मिक प्रवचन दिनुप¥यो भने घण्टौंसम्म बोल्न सक्दथे । योगी आजीवन ब्रह्मचारी, विद्यार्थी र पदयात्रीको रुपले पहिचान भएका व्यक्ति हुन् । उनको ८६ वर्षको उमेरमा विसं. २०५९ फागुन १३ मा देहान्त भएको थियो ।
योगी नरहरिनाथको सम्मान न त राज्यले गर्नसक्यो न त समाजले । हाम्रो देशमा योगी जस्तै धेरै सन्तवीर, विद्वानहरुले आफ्नो जीवनमा समाजलाई चेतना दिने कमै शिक्षा, दिक्षा दिँदै सामाजिक कार्य गर्नुभएका धर्म र कर्म वीर व्यक्तित्वहरुको सम्मान हुनसकेको छैन । योगी जस्तै खप्तड स्वामी पनि हुनुहुन्छ । उहाँले लेख्नुभएको धर्म विज्ञानको किताब अध्ययन गर्ने हो भने उहाँलाई सम्मान दिनैपर्ने हुन्छ । मानव समाजमा यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्न सकिएन भने यसले मुलुकलाई नोक्सानी पु¥याउँछ ।
पहिला दिनहरुमा राजनैतिक गर्ने नेताहरु, सरकारमा बस्ने दलहरुले समाजमा योगदान पु¥याएका यस्ता व्यक्तित्वहरुको खोजी गरी उहाँहरुको ऐतिहासिक सम्मानको लागि राज्यबाट पहल गर्नुपर्दछ । जीवनमा कुनै लोभलालच नगरी सधैँभरि मानवकल्याणको खोजीमा लाग्ने व्यक्तिहरुलाई व्यवस्था गरियो भने अबका दिनमा त्यस कार्यमा लाग्ने मानिसको अभाव हुन जान्छ । राष्ट्रका धरोहर व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न हामीले हरेक समुदायबाट सिक्न जरुरी छ । समाजमा निःस्वार्थ सामाजिक काम गर्ने मानिसको सम्मान गर्नसके त्यसको परिणाम समाजले नै पाउने गर्दछ । आज समाजमा जसले पनि सम्मान खोज्ने परिपाटी बसेको छ । तर, सम्मान दिन जानेका छैनौं । राम्रो काम गरेका व्यक्तित्वको सम्मान गर्नुको साथै राष्ट्रकै लागि योगदान पुत्याएका व्यक्तिहरुलाई पनि सम्मान गर्न सिकौं जुन सम्मानले सबैको सम्मान हुन्छ ।